Kana iwe watotanga kubhadharwa ... Simudza zvinwiwa zvako kumusoro kudenga! (yakagadzirwa) - NYE kuverengwa kweJs, Vjs, Nightclubs 2019
Kana iwe watotanga kubhadharwa ... Simudza zvinwiwa zvako kumusoro kudenga! (yakagadzirwa)
Uye zvino ... iyo inoridza chikamu chikuru cheusiku chinotanga. Kana iwe usisi kuimba pamwe chete, denderedzwa rinotevera riri kwauri! (yakagadzirwa)
Gadzira seni 4. Gadzira seni 4! (yakagadzirwa)